FAQs | Beyin ukupakisha | ukutya ibhegi mveliso
1, Ingaba umzi-mveliso okanye inkampani urhwebo?
Singumzi-mveliso, obeka kwiPhondo laseLiaoning lase China, wamkelekile ukuba utyelele uMzi-mveliso wethu.
2, Yintoni MOQ yakho?
Kwiimveliso esele zilungile, i-MOQ ngama-1000 eekhompyuter, nakwimpahla ehambelana nayo, kuxhomekeke kubungakanani kunye nokuprinta uyilo lwakho. Uninzi lwempahla eluhlaza yi-6000m, MOQ = 6000 / L okanye W ngengxowa nganye, ihlala iphantse ibe ngama-30,000. Okukhona u-odola, ixabiso elisezantsi liya kuba.
3, Ngaba wenza oem umsebenzi?
Ewe, ngowona msebenzi uphambili esiwenzayo. Ungasinika uyilo lwakho ngokuthe ngqo, okanye ungasinika ulwazi olusisiseko kuthi, sinokwenza uyilo lwasimahla kuwe. Ngaphandle koko, sikwanazo neemveliso esele zilungile, zamkelekile ukubuza.
4, Lithini ixesha lokuhambisa?
Oko kuya kuxhomekeka kuyilo kunye nobungakanani, kodwa ngesiqhelo sinokuyigqiba i-odolo yakho kwiintsuku ezingama-25 emva kokuba siqinisekisile uyilo kunye nediphozithi.
5, ndingasifumana njani isicatshulwa?
Okokuqala pls ndixelele ukusetyenziswa kwebhegi ukuze ndikucebise ngezinto ezifanelekileyo kwaye uthayiphe, umz. ingxowa, enefestile okanye ngaphandle kwefestile njengoko ufuna. Ukuba ungandixelela umbandela kwaye uchwetheze ufuna, oko kuya kuba ngcono.
Okwesibini, ubukhulu kunye nobukhulu kubaluleke kakhulu, oku kuya kuba nefuthe kwi-moq kunye neendleko.
Okwesithathu, ukuprinta kunye nombala. Unokuba nemibala eli-9 engxoweni enye, umbala onawo ngaphezulu, iindleko ziya kuba phezulu. Ukuba unendlela ngqo yokuprinta, oko kuya kuba kuhle; ukuba akunjalo, ii-pls zibonelela ngolwazi olusisiseko ofuna ukuluprinta kwaye usixelele ngesimbo osifunayo, siya kuyenzela simahla.
Ubungakanani, ubungakanani. Okungakumbi, kubiza ixabiso eliphantsi.
6, Ngaba kufuneka ndihlawule iindleko zesilinda ngalo lonke ixesha ndi-odola?
Intlawulo yesilinda lixabiso elinye, kwixesha elizayo ukuba uhlela kwakhona ibhegi efanayo uyilo, akusayi kubakho mfuneko yesilinda. Isilinda isekwe kubungakanani bengxowa yakho kunye nemibala yoyilo. Kwaye siya kugcina iisilinda zakho iminyaka emi-2 ngaphambi kokuba u-odole kwakhona.
7, Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
Ngokwesiqhelo i-50% yedipozithi emva kokuba siqinisekisa uyilo, kunye nentlawulo epheleleyo ngaphambi kokuhanjiswa. Ungahlawula nge-TT, ngetyala, nge-PayPal, nge-Western Union, ngoQinisekiso lwezoRhwebo, njl.
8, Njani ngendleko zokuhambisa?
Iindleko zokuhambisa ngenqanawa zahlukile ngokobunzima bebonke kunye nemigaqo oyikhethayo. Ngokwesiqhelo kwimithwalo engaphantsi kwe-100kg, sicebisa ukuba ukhethe ukubonisa, njenge-DHL, i-FedEx, i-UPS, njl. Kananjalo sinokwenza i-DDP kuwe ukuba uyafuna.
Ukuthumela iindleko zotshintsho kubunzima obahlukeneyo, imigaqo kunye nexesha, siya kufumana esona sisombululo sisiso kuwe ngaphambi kokuziswa.
9, Zeziphi iifayile ozamkelayo zoyilo?
Samkela i-AI, iPDF, iPDD, njl.njl. Kananjalo sinokunceda ekwenzeni uyilo lwakho.
10, Ngaba ukubonelela ngenkonzo emva-kwentengiso?
Ewe kunjalo. Okokuqala, siya kujonga kwakhona kwaye kwakhona ngaphambi kokuziswa, kubandakanya umgangatho, ubungakanani, ukupakisha, njl, kwaye sizame konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba ungazifumana ezona bhegi zokupakisha. Emva kokuba uzifumene, sinokunika iingcebiso malunga nokuzizalisa, ukuzitywina nokuzigcina. Ngaphandle koko, xa kukho ingxaki esemgangathweni malunga neebhegi zethu, Siza kuthatha lonke uxanduva esifanele siluthathe, sinxibelelane nawe kwaye sifumane esona sisombululo sisiso.